Historic towns နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/1)
Want to experience the history and culture of Japan in the midst ofatraditional townscape? We have collected together some recommended destinations for you, from the streets of Kyoto to those traditional towns across Japan withaKyoto-like atmosphere, from station towns that flourished in the Edo period to old farming villages like Shirakawago and Miyama.
သစ်သားလမ်းကလေး၏ တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင်ရှိပြီး ချုခုဘချောအနေဖြင့် စည်ကားလာသော မဂိုမဲ။ ပျမ်းမျှ ၆၀၀မီတာမတ်စောက်သောမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင်ရ...
ဂျောခမြို့ ကိုဗဟိုပြုပြီး ကုန်သည်မြို့ အနေနဲ့ တိုးတတ်လာတဲ့ တာကာရာမနမိမြို့ ၊ရှိတမြို့ တန်းဖြစ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ရှေးဟောင်းအိမ်ပုံစံရှိတဲ့...
တိုနဲမြစ်ရဲ့ ရေလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုပြီး အဲဒိုခေတ်မှာ စားသုံးကုန်တွေ စုဆောင်းရာနေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆာဝရက ( အဲဒိုအကောင်းဆုံး ) လို့ ပြောနိုင...
နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်မှ ၃ ရက်နေ့ ထိ တိုးယာမခရိုင် တိုးယာမမြို့ ဟာစွတ်အိုဒေသမှာ ကျင်းပပါတယ်။ ခရိုင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ြ...
၁၆ ရာစုမှ ၂၀ရာစုအထိ တူးဖော်ခြင်း ၊သန့် စင်ခြင်းအထိလုပ်ဆောင်ခဲ့သော မိုင်းတွင်းနှင့် ထိုအနီးအနားရှိ သွယ်တန်းစွာရှိနေသော မိုင်းမြို့ နေရာ။ ...